नियमित यौन सम्बन्ध राख्दा महिलाहरूको स्मरण शक्ति बढ्छ -
काठमाडौं । तपाईंले शारीरिक सम्बन्धको फाइदा बारेमा धेरै पटक पढ्नु र सुन्नु भएको छ। यो कसरतको राम्रो प्रकार हो । यसले तपाईंको मुड राम्रो राख्दछ । साथै यसले तपाईंको रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ। आत्मीय सम्बन्ध मार्फत, तपाईं आफ्नो पार्टनरसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै अवसरहरूमा यसले दुखाईमा राहत (पेन रिलिभर) दिने काम पनि गर्छ । एउटा अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्सले बुढेसकाललाई रोक्छ र यसले कान्छो देखिन मद्दत गर्दछ। उही समयमा, एक नयाँ अध्ययनका अनुसार, त्यहाँ व्यक्तिहरू, विशेष गरी महिलाहरू, दैनिक शारीरिक सम्बन्ध बनाउनेको स्मृतिमा एक सम्बन्ध छ ।
के अध्ययनले भन्छ ?
शारीरिक सम्बन्ध राख्दा महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । एक अनुसन्धानले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको हो । अध्ययनअनुसार दैनिक सेक्स गर्दा महिलाहरूको स्मरण शक्ति बढ्छ ।
बढी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला र सामान्य महिलाबीचमा अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययन बढी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिलाहरूको दिमाग सामान्य महिलाको तुलना तेज हुने निष्कर्षमा पुगेको हो । नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिलाहरूमा दिमागी शक्ति बढी हुन्छ ।
क्यानडामा भएको थियो अध्ययनः
क्यानाडामा मोन्ट्रियलको म्याकग्रील विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले क्यानडामा यो अध्ययन गरेका थिए । यस अध्ययनको परिणामले पीभीआई अर्थात पीनाइल भजाइनल इन्टरकोर्षले स्वस्थ्य एवं जवान महिलाहरूको दिमागमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र सम्झने क्षमतामा सुधार गर्दछ ।
यस अध्ययनमा ७८ हेक्ट्रोसेक्सुअल महिलालाई सहभागी गराइएको थियो । १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूलाई कम्प्युटर गरिएको मेमोरी प्रतिमान पूरा गर्न भनियो जसमा केही काल्पनिक शब्दहरू र अनुहारहरू थिए ।
अर्काइभ्स अफ सेक्सुअल बिहेवियर नामक जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्टबाट नियमित शारीरिक सम्बन्धले काल्पनिक शब्दहरू सम्झना गर्दा सकारात्मक परिणाम दिन्छ भनेर देखाउँदछ, तर यो अनुहार सम्झनाको मामलामा छैन।
अनुसन्धानकर्ताहरूले विचार गरे कि यी नतीजाहरू कसरी भयो। यो विश्वास गरिन्छ कि शारीरिक सम्बन्धले हिप्पोक्याम्पस वरिपरि तन्तुहरूको विकास बढाउँछ। हिप्पोक्याम्पस मस्तिष्कको त्यो अंश हो जुन मेमोरी फन्शनसँग सम्बन्धित छ।
वर्तमानमा, यो स्पष्ट हुन सक्दैन कि यदि सेक्स र हिप्पोक्याम्पसको कुनै सिधा सम्बन्ध छ भने, त्यसो भए अनुसन्धानमा भाग लिएका मानिसहरूले किन केवल शब्दहरू सम्झन सक्थे, किन उनीहरू अनुहार सम्झनमा सफल भएनन्। यो किनभने हिप्पोक्याम्पस सबै प्रकारको मेमोरीको लागि जिम्मेवार छैन। एजेन्सीको सहयोगमा
sex, महिला, यौन सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध
Prev‘जाइरा’ मा नम्रताको यस्तो लुक्स (भिडियोमा)
कसरी लाग्यो बालुवाटार नजिकै सुविसु भवनमा आगो ? (हेर्नुहोस् भिडियोमा)Next